SOMALITALK - CIRAAQ
MAXAAD KA TAQAAN CIRAAQ ??
waxaa isku soo duway:
Cabdiraxmaan Ismaaciil shire (Darbane)
Nairobi Kenya | March 18, 2003
Si uu qof walba uga qaato fikrad ama aragti sax ah, xaalada ka taagan meel ama wadan, waxa uu u baahan yahay inuu wax uun ka ogaado sooyaalka taariikheed ee meeshaas ama wadankaa.
Sooyaalka taariikheed ee Ciraaq maaha mid hal ama laba qormo lagu soo koobi karo, sidaa darteed ayaan bal isku dayey inaan soo ururiyo war bixinno ama taariikho ku saabsan Ciraaq.
Mesopotamia waa eray Greece ah macnihiisuna yahay dhulka laba webi maraan, labadaaas webi oo kala ah Furaat iyo Dijle. Ayaa ah magacii hore e qadiimiga ahaa ee la oranjiray dhulka hadda loo yaqaan Ciraaq, waxa uuna ahaa dhulkaa meelihii ugu ilbaxnimada horeeyey ama ugu qadiimsanaa dunidan aynu saaranahay.
Ilbaxnimadii ugu horeysay ee ka dhalatay gobolkaa waxay aheyd ilbaxnimadii “SUMERIAN” taa oo ka dhalatay koonfur Bari Mesopotamia.
SUMER waxay ka koobneyd 12-magaalo (Adab, Akshak, Bad-tibira Erech, Kish, Lagash, Larak, Larsa, Nippur, Sippar, Umma iyo Ur) magaalo walbana waxay laheyd qalcadeeda iyo sanam-keeda oo ay ilaah ka dhigan jireen rumeysnaayeenna inuu magaalada difaacayo.
Sumerian-ku waxay ahaayeen dad beeraleey ah oo beerta Qamadiga, Timirta, Qudrada. Sidoo kale Lo’da, Ariga iyo Dameerahaba waa ay dhaqanjireen.
Sumerian-ku sidoo kale waxay meel wanaagsan ka gaareen cilmiga Xisaabta iyo Xidigiska. Waxay ilbaxnimadaa jirtaba waxaa bedelay oo ku xigay ilbaxnimadii AKKADIAN-KA ayaduna waxay ka dhalatay dhinaca waqooyi galbeed gaar ahaan meesha ay isaga soo dhawaadaan labada webi ee Furaat iyo Dijla, ugu dhawaan meesha hada ay Baghdad tahay.
Sidoo kale waxaa ku xigay tii ASSYRIA oo ku baahsaneyd inta badan Koonfurta Turkey, Syria, Lebanon, Palestine, Israel, galbeedka Iran, Kuwait, iyo Masar.
ASSYRIAN-tu waxay intooda badan ahaayeen dad beeraleey ah maamulkooduna wuxuu ku dhisnaa boqortooyo.
BABYLONIA waxay ahaayeen dad ku dhaqan magaalooyin iyo beerahaba ayadoo boqortooyadu inta badan ka koobnayd 10-15 magaalo, magaaladiina ay ku nooshahay 10,000-50,000 ruux, xukunkooduna waxaa uu ku saleysnaa boqortooyo, maxkamaduna waxay aheyd xarunta sharciga ayadoo maxkamad walbaa ay leedahay 1-4 qaadi.
Bulshada Babylonian-ku waxay u kala qeybsanaayeen sadex dabaqadood oo kala ahaa. (A) Dabaqadda sare ee loo yaqaanay “AWILU” waxaana dabaqaddaa ahaa saraakiisha dowladda, wadaadada diinta iyo dadka hantida heysta.
(B) Dabaqad dhexe oo la oranjiray “MUSHEKNU”waxayna ahaayeen dadka beeraleeyda ahaa. (C) Dabaqada hoose (WARDU) waxaana ahaa dadka la gumeysto.
Ilaha dhaqaalaha ay ku tiirsanaayeena waxaa u weynaa beeraha sidoo kalewaxay ganacsi la laahaayeen dibada.
Wuxuu boqorba boqor isu dhiibaba taariiqda islaamku markey aheyd 17-hijriyada oo ku begnayd waqtigii khilaafadii Cumar “RC”ayaa ciidan uu hogaaminayo “KHAALID BIN WALIID” oo tiradiisu dhamayd 18,000 ay qabsadeen Ciraaq dhulkii la oranjiray Mesopotamia halkaana waxaa ku dhexmaray dagaalka loo yaqaano (Dhat al-Salasil) “dagaalkii silsiladaha” magacaana waxa uu ku baxay markii ay gaaladu isku xirxireen silsilado si aysan u kala cararin. dagaaladii kale ee ay isaga horyimaadeena waxa ka mid ahaa “BUWAYBA” iyo kii la oranjiray “AL-QAADISIYAH” ahaana kii ugu danbeeyey ee lagu dilay boqorkoodii la oranjiray “RUSTUM”.halkaana waxaa aawoodii kula wareegay islaamka oo u talinayey dhulkaa.
Waqtigu wuxu is badbadalaba waxa dhashay xukunkii Cabbaasiyiinta magaalo madaxna waxay ka dhigteen “Baghdad”, taa oo noqotay meel aad muhiim u ah xaga ganacsiga, dhaqanka iyo xaruunta awooda ee dunida ee markaa. Waqtigii ugu fiicnaa ee soo marana waxaa uu ahaa waqtigii uu xukumayey “HARUN AR RASHID” amniga iyo ganacsiga ka sokoow waxay aad ugu horumartay cilmiyada sida Xisaabta, gaar ahaan Al-gebrada, caafimaadka ayadoo ay Baghdada tahay meelihii dunida ugu horeeryay ee Isbitaal sameysta, waxaana u dheeraa ayadoo isbitaalkaa ay gudahiisa ku yaaleen Machadyo caafimaadka laga barto.
Ugu danbeyntii wuxuu xukunkii Cabaasiyiinta halkaa ka jiraba waxaa qabsaday nimankii la oranjiray “Mongol” ama TATAAR ayadoo ay aad u qaribeen una burburiyeen magaaladii aheyd Baghdad.
Sidoo kale xukuumadihii soo maray waxaa ka mid ahaa uguna danbeeyay xukuumaddii Othmaniyiinta ayaga oo dhulkaa xukumayey ilaa gumeysiga Ingriisku qabsado qaar ka mid ah dhulkaa.
Ciraaqdan cusub oo ay soo mareen gumeysigii Ingriiska iyo dawlado aad u fara badan oo intoodii badani ku yimaadeen nidaam afgambi ah bal aan u kal qaadno waqtigii gumeysiga iyo madaxbanaanidii ka danbeysay.
A- Waqtigii gumeysiga
Waqtigii dagaalkii 1-waad 1914-ki ayaa Ingiriisku qabsaday koonfurta Ciraaq taas oo ka danbeysay markii Ingiriisku taageero ka helay hogaamiyayaal meelo badan oo dhulka carabta ahaa, ahaana xiligaas kuwa xornimo doon ahaa, rabayna ineey ka go’aan Cuthmaaniyiintii Turkiga, waxaana ka mid ahaa “Hashemite” qoyskii Xuseen Ibn Cali ayadoo markaa Ingirisku u balanqaaday inuu xornimadooda aqoonsan doono dagaalka ka dib.1917-kiina Ingiriisku waxaa uu qabsaday Baqdaad.
1920-kii ayaa waxaa bilaawday kacdoono xornimo doon ahaa taas oo ay keentay ka dib markii la daahsaday balantii aheyd in xornimo la siinayo dagaalka ka dib. Ingirisku waxaa uu caburiyey kacdoomadaa xornimo doonka ah burburiyeyna.
Ingriisku kadib markuu arkay in uusan danahiisa ka fushan karin Ciraaq gudaheeda oo uu la kulmay mucaaraddo badan ayuu goostay qorshe ah in uu sameeyo dowlad isaga taageersan, markaas asaga oo ay taageerayaan qaar ka mid odayaasha qabaa’ilka ayaa March 1921 la saxiixday heshiis ahaa inuu Feysal noqdo boqorka wadanka ayadoo weli Ingirrisku dusha ka heysto.
23-kii Ogosto 1921 ayaa la dhisay boqortooyo uu hogaaminayey Feysal Ibn Xuseen.
10-Oktobar 1921 ayuu boqorku la saxiixday heshiis gaashaanbuureysi ah Ingiriiska. 1930-kiina waxaa uu heshiis kale la saxiixday Ingiriska kaas oo ahaa in ciidamada Ingiriisku sii joogaan Ciraaq xornimana ay gaarsiiyaan.
B-Madaxbanaanidii ilaa waqtigan
Wadanku xornimadiisa ma uusan qaadan ilaa laga gaaray 3-Oktobar-1932 markaa oo lagu dhawaaqay xornimada wadanka ayadoo uu hogaamiye u yahay boqor Feysal isla markaana ku biirtay ururkii qarama (League of Nations) sanad ka dib 8-dii Septembar-1933 ayaa waxaa geeriyooday borqorkii feysal asaga oo joogay markaa magaalada Bern ee dalka Switzerland waxanaa halkaa xukunkii bortooyada kula wareegay willkiisii Ghazi.
Bartamihii 1936-dii Ghazi waxaa uu gaashaanbuur la sameystay qaar ka mid ahaa qaramadii carabta gaashaanbuureysi taa oo loo yaaqaanay dhaqdhaqaaqii carabnimada (Pan-Arab Movement) ujeedadeeduna aheyd in ay isku darsamaan qaramada Carabtu, isla sanadkaa wax uu ahaa sanadkii uu afgambigii milateri ee ugu horeeyey ka dhaco wadan carbeed.
3-April-1939 ayuu boqorkii Ghazi ku geeriyooday shil baabuur xukunkiina waxaa la wareegay wiilkisii Feysal ayadoo xukunka boqornimadu uu u sii heynayo adeerkii Amir Abdal Ilah maadaama uu san Feysal aheyn qaangaar jirayna markaa afar sano.
Horaantii dagaalkii labaad ee dunida Ciraaq waxay aad u taagersaneyd Ingirirska. si kastaba ha ahaatee ninkii ay ku weyneyd wadaniyadda Carbeed aadna uga soo horjeeday Ingiriiska Rashid Ali Geylani ayaa noqday ra’isul wasaare asaga oo badalay Nuri as-Said.
Ra’isul wasaaruhu waxaa uu istusay in xiriir sokeeye oo lala sameysto Jarmalka ay tahay rajada kaliya ee lagaga bixi karo gacan ku heynta Ingiriiska, markaa ayuu Rashid Cali soo bandhigay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa ciidamada Ingriiska; Abd Al Ilah iyo Nuri as-Said labadooduba waxay ka soo horjeesteen fikraddaa siyaasaddeed ee Rashid Cali kuna cadaadiyeen in uu is casilo, taa asaga oo ka duulaya ayuu Rashid Cali, april-1941-kii xukunka kula wareegay afgambi milateri asagoo kaalmo ka helaya jarmalka. markaa ayay sii hayihii boqornimada iyo intii ka ag dhaweydba ay u baxsadeen Habaniyah ugana sii gudbeen Basrah ilaa ay galeen Cumaan-Jordan .markiiba Ingirisku waxa uu sii kordhiyey ciidamadiisii difaaca soona dejiyey Basra halkaana uu ka dhacay dagaalkii afarta asbuuc ugu danbeyntiina laga guuleystay Rashid Cali iyo ciidamadiisii.may-30-keedii Rashid Cali iyo dawladiisii waxa ay u carareen dalka Iran ilaa ay ka tageen Jarmalka.
1-dii June ayaa uu Ingiriisku u yeeray sii yahihii boqortooyada Abd Al Ilah waxayna kuna soo celiyeen xukunkii.
May-1953-dii ayuu boqorkii Feysal xunkunka si toos ah ula wareegay ka dib markuu sideed iyo toban jir saday.
14-July-1958 ayaa afgambi milateri oo ay hogaaminayeen Abdulkarim Qassem iyo col. Abdulsalam Arif kula wareegeen xunkunkii waxayna halkaas ku dileen boqorkii Feysal iyo adeerkii Abd Al Ilah iyo ra’isul wasarihiisii Nuri as-Said.
Inkastoo dhow jeer laysku dayey in si shirqool ah lagu dilo Abdulkarim Qassem laakiin maysan noqon kuwa lagu guuleysto, wuxuu wadanku ku jiraba dagaanasho la’aan siyaasadeed iyo afgambiyo isku xigxigsaday, ayaa 8-feb-1963-dii lagu dilay Abdulkarim Qassem shirqool ay soo maleegeen saraakiil ka tirsanaa xisbiga Ba’ath, loona doortay Abdulsalam Mohamed Arif Madaxweyne, ra’isulwasarana Axmed Xasan Al-Bakr.
13-apr-1966-dii ayaa madaxweyne Abdulsalam Mohamed Arif ku dhintay shil diyaaradeed waxaana xukunkii la wareegay walaalkii Gen.Abdulrahman Arif. 1967-dii waxaa dhacay dagaalkii qaatay lixda casho kaa oo ay xisbiga Ba’ath ku dareemeen awooda xooga badan ee ay kulee yihiin xukunka ayaga oo 17-July-1968-dii xukunka kaga tuuray afgambi aan dhiig ku daadan, halkaana uu Axmed Xasan Al-Bakr ku noqday madaxweynihii dalka..
Sanadahaa intii lagu guda jiray Ciraaq ayaa aheyd mid u halgameysay qaranimada carabta, waxayna sidoo kale aheyd madaxii ciidankii hogaaminayey dagaalkii Israel iyo Carabta ee 1967.
1970-kii ayuu aad u sii xumaaday xirirkii Ciraaq iyo Iraan ka dib markii dowlada Iraan ay siisay taageero hub ah , hogaamiyihii Kurdiska Mustafa Al-Barzani.
6-march-1975 ayaa sadam Xuseen oo ahaa nin ay xigaalo yihiin madaxweyne Al-Bakr heshiis la saxiixday shaahii Iraan, heshiiskaas oo ahaa in Ciraaq ay ka tanaazusho xurguftii dhuleed ee ka dhaxeysay, labada dal sida Khuzestan iyo Shatt el-arab Iraana ay joojiso taageerada ay siinayso kacdoonka Kurdiska.
Qalalaase dheer iyo dagaalo badan ka dib dhamaadkii sanadkii 1977 ayaa dadka Kurdiska ah loo ogolaaday in la siiyo xukun hoosaad lana aqoonsaday luuqada Kurdiska si sharci ahaan ah.
June-1979-kii Sadam Xuseen waxa uu ku qasbay madaxweyne Bakr inuu xukunka ka dego halkaana waxaa xunkuki kula wareegay Sadam Xuseen.
Isla sanadkii xigayba 17-sep-1980-kii Sadam waxaa uu ku dhawaaqay, kana soo qaaday waxba kama jiraan heshiiskii uu lagalay Shaaha Iraan wuxuuna cadeeyey in Shatt el-Arab, Ciraaq ku soo noqotay. shan maalin ka dib 22-sep-1980 waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iraan kaas oo socday mudo sideed sano ah sababayna in dhaqaalaha labada wadan uu aad hoos ugu dhaco siiba soo saarida Saliida, dad hal milyan lagu qiyaasayna waxay ku dhinteen dagaalkii labada dal.
20-august-1988 ayaa waxaa dhacay xabad joojintii Ciraaq iyo iraan ka dib soo saaridii qaraarkii qaramada midoobay ee la oranjiray (UN Resolution 598).
Isla markiiba Ciraaq waxey dib u habeeyn ku sameeysay Ciidmadeedii.
17-July-1990-kii Ciraaq waxa ay kuwait iyo Imaaraatka ku eedaysay in ay suuqa Saliida ku harqiyeen Saliid aad u jaban, isla bishaa ayay yeesheen wadahadalo toos ah laakiin waa lagu guuldarestay in xal laga gaaro murankaa, taa oo ay garab socotay Mareykanka oo Ciraaq hubaal uga dhigay in ay soo faragalin doonin xurguftaa u dhaxeysay Ciraaq iyo Kuwait kulan ay yeesheen Sadam iyo Safiirkii Mareykanka ee la oranjiray April Glaspie 25-july 1990.
Dawladaha Carabata ayaa ku qanciyey Ciraaq iyo Kuwait in ay murankooda ku dhameeyaan wadahadalo isuguna yimaadaan Jidah, Sacuudiga. Wuxuuna kulankaas dhacay 1-ogosto-1990 nasiib daro ma noqon mid wax ka tara dhibkii jiray waxaana lagu balamay kulankan xiga in lagu qabto Baqdad, laakiin Ciraaq maalinkii xigtay Ciidamdeedii waxay ay gabi ahaanba qabsadeen Kuwait. Isla markiiba waxaa eedeeyay qabsashadaa Golaha Amaanka iyo Uruka Jaamcada Carabta. Afar maalin ka dibna Golaha Amaanku waxaa uu Ciraaq ku soo ragay cuno qabatayn, Ciraaq taas ayadoo ka jawaabeysa ayey ku dhawaaqday in Kuwait ay tahay Gobolkii 19-naad ee Ciraaq.
Nov-1990-kii Golaha Amaanku waxaa uu soo saaray qaraar ogolaanaya in la adeegsado wax walba oo suura gal ah si Ciraaq looga saaro Kuwait kaas oo la oranjiray (Resolution 678) dalbanayana in ay Ciraaq si dhan uga baxdo Kuwait ugu danbeyn 15-ka jan-1991.
Sadam arintaa muusan ogolaan halkaana waxaa ku biloowday dagaalkii gacanka (operetion “Desert storm”) 17 January 1991, 3.am waqtiga Ciraaq, ayay Ciidamo gaashaanbuur ah oo ka koobnaa 28-dawladood oo uu Mareykankuna uu hogaaminayey.waxay dagaal ku qaadeen Ciraaq dagaalkaas oo burbur xoog badan u geystay Ciraaq, wuxuuna socday mudo lix usbuuc ah.
April-1991 ayaa xabad joojin dhab ah lagu heshiiyay.
27-June-1993 ayaa mareykanku ku duqeeyay xarunta wardoonka ee Baghdad 23- gantaal oo ah kuwa looyaqaan “Tomahowk cruise missile”
Ayaga oo laga soo tuurayey maraakiibta dagaalka ee fadhiday Bada Cas iyo Gacanka Khaliijka.
May-1994 waxaa dagaalamay taageerayaasha labada urur ee kala ah “ururka wadaniga ee kurdistan”(Patriotic Union of Kurdistan) iyo “xisbiga dimoqradiga Kurdistan”(Kurdistan Democratic Party) kaas oo sababay geerida 300- oo qofood.
Nov-10-1994 ayaa Ciraaq waxeey si dhab ah u aqoonsatay madaxbanaanida kuwait.
May-1995 Sadam waxaa uu eryay walaalkii Wathban oo ahaa wasiirkii arimaha gudaha.
August-1995 Major General Xuseen Kamil Xasan Al-majid oo ahaa wasiirkii warshadaha milateriga ahaana nin daacad u ah Sadam ayaa u baxsaday Jordan asaga oo ay la socoto xaaskiisii oo aheyd gabar uu dhalay Sadam iyo walaalkii oo asna qabay gabar uu dhalay sadam kuna dhawaaqay in la rido dowladan.
May-1996 Ciraaq waxa ay heshiis la gashay Qaramada Midoobay kaa oo ogolaanaya in ay Ciraaq gadi karto $1-Bilion Saliid u dhiganta 90-kii beriba, lacagtaas oo loo isticmaalayo raashin iyo daawo iyo magdhaw kuwait lasiinayo.
1997-baarayaashii hubka ee Qaramada Midoobay ayey Ciraaq eriday
Dec-1998 Mareykanka iyo Biritain waxa ay bilaabeen duqeyn joogta ah ee xarumaha milateriga Ciraaq.
MADAXDII SOO MARTAY CIRAAQ
20-May-1885 ayuu ku dhashay Maka wuxuuna ahaana wiilkii 3-aad ee xusen bni Cali boqorkii xijaaz.
1908-ayaa Maka looga dhigay gudoomiye wuxuuna maamulka kala
shaqeyn jiray aabihii.
1915-waxa uu u safray Dimishiq si uu hubaal uga dhigo taageerada carabtii qaranimo doonka aheyd
1916-waxaa uu hogaaminayey kacdoonkii Carabta ee Hijaaz gudaheeda loogana soo hor jeeday Cuthmaaniyiintii taas oo ay ka dhalatay xornimadii Xijaaz. Aabihiina waxaa uu noqday boqorkii xijaaz.
August-1923 ayaa loo caleemo saaray boqornimada Ciraaq.
Sept-8-1933 feysal waxa uu ku dhintay Bern, Switzerland.
1912-ayuu ku dhashay Maka
1921-waxa uu noqday amiirka leh dhaxalka boqortooyada.
1933-waxaa uu noqday boqorka Ciraaq.
April-1939 waxaa uu ku dhintay shil baabuur.
Abdullah Bni Cali
1912-ayuu ku dhashay Xijaaz
1925-waxaa uu yimid Ciraaq asagoo la socda reerkooda ka dib markii Xijaaz uu qabsaday Boqor Ibn SA’ud
1939-markii uu geeriyooday boqor Ghazi wiilkiisii Feysal II waxaa uu ahaa 4-jir Abullah ayaa markaa noqday sii hayaha boqornimada.
April-1941-afgambigii markuu dhacay Abdullah iyo boqortooyada inteedii kale waa ay baxsadeen
June-1941-Abdulah waxaa loo ogolaaday inuu wadanka ku soo noqdo ka dib markii Ingiriisku cagta mariyey afgambigii iyo kooxdiisiiba.
1953-Feysal ayaa qaangaaray oo la wareegay boqornimadii Abdullah-na waaxaa lo magacaabay Amiirka Ciraaq.
14-july-1958-waxaa lagu dilay afgambi milateri oo ahaa mid boqortooyo naceyb ku dhisan.
2-May-1933-ayuu dhashay asaga oo ahaa wiilkii kaliya ee boqorkii Ghazi.
1940-waxaa uu dhigtay Harrow School ,Britain
1953-waxaa loo saaray taajka boqornimada.
14-July-1958-ayaa lagu dilay afgambigii ay Ciidamadu hogaaminayeen.
1914-ayuu ku dhashay Baghdad waxana iska dhalay aabe suni ah iyo hooyo shiica ah
1948-49-waxaa uu ka dagaalamay Falastiin
14-July-1958-ayuu afgambi ku qabsaday wadanka, wuxuuna noqday ra’isulwasare iyo wasiirka gashaandhiga.
1960-waxaa uu marti galiyey shir ay isugu yimaadeen dawladaha Iraan, Kuwait, Saudi Arabia iyo Venezuela si loo sameeyo (OPEC) ururka wadamada Saliida dhoofsha.
Feb-8-1963-ayaa ladilay asaga iyo in badan oo kooxdiisii ah.
1920-waxaa uu ku dhashay Baghdad
1930’s ayuu ku biiray kuliyada Ciidamada ka dibna waxaa uu noqday sarkaal.
14-July-1958 waxa uu xubin muhiim ah ka ahaa afgambigii lagu riday boqortooyada asagoo madax ka ahaa Ciidankii qabsaday Baghdad
Sept-ayaa laga qaaday dhamaan jagooyinkii uu hayey ka dib markii ay isku dhaceen ra’isulwasare Qasim ayaa la xiray oo lagu eedeeyey inu qorsheynayey inuu dilo Qasim kadib waxaa waxaa lagu xukumay dil toogasho
1961-ayaa xabsiga laga soo daayey.
Feb-1963-wuxuu ka qeyb qaatay afgambigii Qasim xukunka looga tuuray kaa oo ay hogaaminayeen saraakiil xisbiga Ba’ath ka tirsanaa . Arif waxaa uu noqday madaxweyne.
Ap-1966 waxa uu ku geeriyooday shil diyaaradeed.
1916-waxaa uu ku dhashay Baghdad.
1930’s ayuu ku biiray kuliyada Ciidamada wuxuuna noqday sarkaal
Feb-1963 kii ka dib kacdoonkii xisbiga Ba’ath ee lagaga tuuray xukunka Qasim, Arif walaalkiisna madaxweyne noqday ayaa waxaa asaga loo dhiibay Ciidanka oo dhan
Apr-16-1966 dhimashadi walaalkii ka dib waxaa uu noqday madaxweynaha Ciraaq
July-17-1968 xukunkii ayaa looga tuuray afgambi ay wadeen xisbiga Ba’ath waxaana hogaaminayay Axmed xasan Bakr iyo Abdulrahman Nayif. Markaa ayuu u baxsaday Istanbul, Turkey.
1980’s Sadam ayaa u yeeray oo waxaa uu ku soo noqday Ciraaq.
AXMED XASAN AL-BAKR
1921-waxaa uu ku dhashay Tikrit
1938-ayuu ciidamada ku biiray
1956-ayuu si qarsoodi ah ugu biirayu Ba’ath asagoo korneel ah.
Feb-1963 waxa uu qeyb ka ahaa afgambigii lagu riday Qasim wuuxuna noqday ra’isul wasare.
17-July-1968 Bakr iyo taageerayaashiisu waxa ay rideen dawladii madaxweyne Arif, Bakr-na wuuxuna noqday madaxweynaha dalaka Ciraaq.
1970-waxaa uu heshiis lagalay hogaamiyayaasha Kurds-ka ee waqooyiga
June-1979 Bakr waxaa uu fariin qarsoodi ah u diray madaxweynihii Syria Asad taa oo aheyd in ay bilaabaan wadahadal ah in ay isku darsamaan labada dal, Sadam arintaa waa uu ka soo horjeestay wuxuuna ku qasbay Bakr inuu xukunka ka dago. Waxaana la dhigay xabsi guri.
4-Oct-1982-waxaa uu u dhintay daruufo aan lagaraneyn.
Ap-28-1937-ayuu ku dhashay Auja oo u dhow magaalada Tikrit oo u jirta 200km waqooyiga Baghdad.
1956-ayuu ku biiray xisbiga Ba’ath
1958-lix bilood ayuu xirnaa ka dib markii lagu eedeyay inuu waday dhaqdhaqaaq dowlada looga soo horjeeday.
1958-waxaa uu ka qeyb qaatay afgambigii leysku dayey in xukunka looga tuuro Abdulkarim Qasim, wuxuuna ka dhaawacmay lugta kadibna waxaa uu ufakaday Syria ka dibna Masarayuu sii galay.
Feb-25-1960-ayaa dil lagu xukumay asaga oo dalka dibada kaga maqan.
1962-waxaa uu Masar ku dhameystay dugsiga sare.
Feb-8-1963-waxa uu ku soo noqday Ciraaq.
Oct-14-1964-ayaa la xiray waqtigaa oo ay socdeen olole lagaga soo horjeeday xisbigii Ba’ath.
1966-ayaa asaga oo xabsiga ku jira loo magacaabay ku xigeenka xoghaya guud ee xisbiga Ba’ath.
1967-xabsiga ayuu ka fakaday.
1968-asaga oo xubin firfircoon ka ahaa afgambigii waqtigaa waxaa uu mas’uul ka noqday nabadgelyada gudaha wadanka, isla sanadkaana waxaa uu dhameeyay kuliyada sharciga.
June-1-1972-waxaa uu hogaaminayey qorshe lagu qarameynayay ilaha Saliida kuwaaa oo ay maamulayeen shirkado reer galbeed ahaa.
June-1979-Sadam waxaa uu noqday madaxweynaha dalka Ciraaq.Ka dib markii uu xukunka kala wareegay madaxweyne Bakr taa oo ka dhalatay damacii Bakr ee ahaa in uu Syria la midoobo Sadamna taa waa uu ka soo horjeeday. Wuuxuna ku xukumay xabsi guri.
Sep-17-1980-Sadam waxaa uu ka baxay heshiiskii uu 75-kii la galay Iraan ee ku saabsanaa xuduudaha.
Sep-22-1980- waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iran.
1988-Ciraaq ayada o kaalmo ka heleysa Ciidamada bada ee mareykanka ayey dib u qabsatay dhulkii Iraan kaga qabsatay intii dagaalka lagu guda jiray ee u dhaxeysay 1984-86.
July-waxaa dhamaaday dagaalkii Iraan iyo Ciraaq.
Aug-2-1990-Ciraaq waxa ay qabsatay Kuwait.
Jan-17-1991-ayaa in ka badan 30-dawladood Ciraaq ka saareen dhulkii Kuwait.
1994-dhaqdhaqaaq melateri ayuu Sadam ka sameeyay xuduudka Kuwait.
1998-Sadam waxaa uu eryay shaqaalihii qaramada midoobay.
Oct-15-2002-waxaa la qabtay doorashooyinkii madaxweynaha Sadam waxaa uu ahaa musharaxa kaliya ee u taagan madaxweynenimada wuxuuna ku guuleystay aqlabiyad dhan cod ah 100%.
Sadam waxaa uu 1958-guursaday Sajida khayrallah waxayna u dhashay shan caruur ah oo kala ah laba wiil (Uday iyo Qusay) iyo sadex gabdhood.
MADAXDA KU DHOW DHOW SADAM
AZIZ:-ku xigeenka ra’isulwasaraha iyo wasiirkii arimha dibada waqtigii dagaalka gacanka waxaa uu dhashay 1936-waqooyiga Ciraaq, waxaa uu ka baxay Jaamcada Baghdad,qeybta luuqadaha asaga oo dhigtay (english literature) suugaanta Ingiriiska. Marna waxaa uu ahaa wasiirka warfaafinta.
TAHA:-madaxweyne ku xigeenka dalka Ciraaq waana dadka aadka u dhow dhow Sadam waxaa uuna ka badbaaday laba shil-1997 iyo mid-1999.
SAA’DOUN:-waxaa uu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad ee taliska Sadam laga soo bilaabo horaantii xisbiga Ba’ath, mar waxaa uu ahaa madaxa shirkada Saliida qaranka ee Ciraaq ka hor intaan loo magcaabin wasiirka saliida 1970-kii. Waxaa u soo qabtay xilal aad u muhiim ah oo ay ka mid tahay ,wasiirka arimaha dibada intii u dhaxeysay 1974-1984. Sidoo kale ra’isulwasare ku xigeen 1989-1991..ra’isulwasare 1991.
1957-ayuu shahaadada doktareydka ka soo qaatay Jaamacada Wisconsin, USA. Qeybteeda dhaqaalaha.
IZZAT:-waxaa uu ka mid yahay dadka tirada yar ee uu Sadam aaminsanyahay.1942-ayuu ku dhashay meel u dhow Tikrit.
Izzat.Taha iyo Sadam waa madaxda kaliya ee ka badbaaday afgambigii 1968 ee uu xisbiga Ba’ath xukunka kula wareegay.
AL-MAJID:-waa nin ay qaraabi yihiin Sadam, waxaa uu madax ka ahaa Ciidankii Ciraaq ee weeraray magaaladii Kurdish-ku daganaa ee Halajba-1988 weerarkaa oo la aaminsanyahay in Kurdish-ka loo isticmaalay hubka kiimikada ah,halkaana Al-majid waxaa ugu baxay magaca ah ALI-Chemical.
Ciidanka Ciraaq waxaa gaaray dhib aad u weyn dagaalkii gacanka hoos
U dhac badan ayy kala kulmeen. Qeybaha ugu waaweyn ee Ciidanka Ciraaq.
Waxaa ka mid ah, Ciidanka Cirka, kuwa Bada iyo kuwa dhulka.
Ciidanka Cirka:-Ciidanka cirka Ciraaq waxaa uu aad u burburay dagaalkii gacanka ayada oo Ciraaq dagaalkaa ku weyday 37- diyaaradood oo hawada lagu burburiyey 100-kalena lagu burburiyey ayaga oo dhulka fadhiya, 112-na waxaa ay u baxsadeen xaga Iraan, qaarna waxaa ay la fadhiyaan dayactir la’aan taas oo ay keenatay cunaqabataynta saaran.
Hada Ciraaq waxa ay heysataa 316-diyaaradood oo kuwa dagaalka ah.
H-6D iyo TU-22 iyo noocyada kale ee kala ah Miraage F-1Eqs, Su20s, Su22s, Su24 iyo Su.
Sidoo kale kuwa difaaca cirka oo ay ka mid yihiin MIG-25s, 50-MIR 29, MIG recce, sidoo kale kuwa xamuulka IL-76 iyo kuwa kale oo tira badan.
CIIDANKA BADA:-Maraakiibta dagaalka ee Ciraaq waxaa ay dhan yihiin sida la sheego 6-markab oo waaweyn, ciidanka badanu waxa uu dhan yahay ilaa 2000 oo ciidan kuwaa oo kala fa dhiya sadex dakadood oo kala ah (BASRA, AZ-ZUBEYR,UMM QASR).
TAANGIYADA DAGAALKA:-Ciraaq waxaa ay leedahay taangiyada noocyada kala ah (T-72, T-62, T-55) iyo kuwa fudu fudud oo ah nnooca(PT-76s) sidoo kale baabuurta gaashaaman oo kala noocyada ah .
1-BMP-1 IYO BMP-2.
4-EE-9 IYO AML-90
6-PSZH-IV, BTR-50, BTR-60, BTR-152, EE-11, OT-62, OT-64, WALID, M-60P. iyo in badan oo anti tangi ah.
DIYARADAHA QUMAATIGA U KACA:- Ciraaq waxa ay leedahay diyaaradaha qumatiga u kaca ilaa 100-diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo waa weyn iyo 275 ah kuwa yar yar ee qumaatiga u kaca waana noocyada kala ah.(S-342, SA-321 EXOCAT, MI-24, SA-315, AS-12, SA-316/319, SS-11/12,BO-105, AS 11/HOT.
MADAAFIIC:- waxa ay leedahay madaafiic gaareysa ilaa 2050 madaafiic iyo HOWITZER.
Kurds-ku waa dadka ku nool inta u dhaxeysa koonfurta Turkey, waqooyi bari Syria, waqooyiga Ciraaq, galbeedka Iran, Azerbaijan iyo Armenia.Tirada dadka ee Kurdiska aad ayaa loogu kala duwanyahay waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxeysa 15-25 milyan intooda badan waxay ku noolyihiin Turkey, Kurdiska waxey ku hadlaan afka kurdiska, inta badan dadka kurdiska ah waa muslin Suniyiin ah inkastoo ay jiraan qaar ah shiico iyo kuwo cawaan ah oo ku kala firisan Turkey iyo Syria.
Kurdiska ku nool Kurdistan intooda badan waxay ku noolyihiin magaalooyinka.qaarna waa xoolo raacato,, beera falasha iyo dhaqashada Idaha waa lafdhabarta dhaqaalaha ee kurdiska.
Kuridska waxay inbadan ku hoos jireen xukuumadao ajnabi ahaa. Qarnigan ayey isku dayeen ineey aasaasaan Kurdistan.Ciidamada gaashaanbuurta ee dagaalkii koowaad ayaa kurdiska u balanqaaday in dowlad looga dhisayo gudaha turkey dagaalka koowaad ka dib laakiin balantii looma oofin.
Kurdiska Ciraaq waxay dowlada Ciraaq la dagaalamayeen ayaga oo kaalmo ka helaya Iraan laga soo bilaabo 1962-70 iyo 1974-75 wuxuuna joogsaday ka dib markii xiriirka labada dal ee Ciraaq iyo Iraan uu hagaagay 1975. Gudaha Turkey-na waxay kacdoon ka bilaabeen 1984 oo ilaa hada socda inkastoo aan wax guul ah laga gaarin.
Markale ayey kurdiska Ciraaq bilaabeen kacdoon dagaal ah waqtigii dagaalkii gacanka 1991 inkastoo si dhaqso leh cagta loo mariyey taas oo sababtay in inku dhow 1-milyan oo kurdis ah u qaxaan Turkey.
Hadii la abuuro wadan Kurdistan. Wadamada deriska ah waa mid ay u arkaan colaad haba ugu weynaato Turkey oo ka mid ah gaashaanbuurta NATO.
Lasoco qoraalada kale ee Darbane....
TIXRAAC: SAWIRADA Sawirada: Encyclpaedia of the Orient, CNN, AP
CIRAAQ & DAGAALKA MAREYKANKU LA DAMACSAN YAHAY
MUDAHARAADYO LOOGA SOO HORJEEDY DAGAALKA CIRAAQ....